सकियो हुलाकी सडकको विवाद – Satyapati
सकियो हुलाकी सडकको विवाद
बाँके । नेपालगन्जदेखि कट्कुईयासम्म निर्माणाधिन हुलाकी राजमार्गमा देखिएको वर्षौदेखिको विवाद साम्य भएको छ । राप्तीपारि नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मटेहियास्थित सडक नक्सांकन, मुआव्जा विवाद र निर्माण कार्यमा देखिएको अवरोधमा निकास खोजिएको हो ।
सम्वाद समूह बाँकेको पहलमा हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरिएको सर्वपक्षिय सहमतपिछि निर्माण कार्यले गति लिने विश्वास गरिएको छ । सडकको अन्य भागमा कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको छ । हाल चालु सडकलाई नै कायम राख्ने गरी निर्माण कार्यलाई अविलम्व बढाउने, निर्माणमा अवरोध नगर्ने, उत्तरतर्फको सडक नक्सामा परेको (व्यक्तिगत) जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र चालु सडकमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा (१०मी.) दिने कुरामा लिखित सहमति कायम गरिएको छ ।
नेपाल सरकारकै लगानीमा हुलाकी राजमार्ग योजनाले ४४ किलोमिटर सडक २ खण्डमा विभाजित गरेर २०७३ फागुनदेखि निर्माण थालेको हो । निर्माण कार्य ०७६ असार मसान्तसम्म पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा रहेको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माणको ठेक्का पप्पु लुम्बिनी जेबी कन्ट्रक्सनको नाममा रहेपनि पप्पुले यो ठेक्का ६० करोडमा गणपति कन्ट्रक्सनलाई दिएको छ । मटेहियामा हुलाकी सडक उत्तरतर्फकी दक्षिणतर्फ भन्ने सवालसँगै जग्गा फिर्ता र मुआव्जा लगायतका विषयमा जग्गाधनीबीच नै अन्यौलता र विवाद रहदै आएको थियो ।
हाल चालु हुलाकी सडक खण्ड भन्दा फरक सर्भे (उत्तर) र नापी भएपछि उत्पन्न विवाद बढन गई ०७५ वैशाखदेखि सडकको निर्माण कार्य नै अवरोध भएको थियो । पूर्व र पश्चिमतर्फ सडक ग्रावेल बनीसकेको छ भने अवरोध सो खण्डको ३ सय मिटर बाटो खाल्डा खुल्डीकै स्थितीमा छ । निर्माण रोकिएपछि सहज आवात जावतमा समस्या परेको थियो । नियमित सम्वाद प्रक्रियामार्फत जग्गाधनीमा विश्वास अनी सहज बातावरण सिर्जना गर्दै सार्थक र स्थायी निकासको मार्ग पहिल्याएको हो ।
समूहले करिव १० महिनादेखि स्थानीय जग्गाधनी, सम्वद्ध सरोकारवालासँग सम्वादमार्फत विवाद सहजीकरण गर्दै आएको समूहका सहजकर्ता शुक्रऋषि चौलागाईले जानकारी दिए । सम्वाद समूह सदस्यसमेत रहेकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्णाले नक्सांकन विवादलाई सम्वोधन हुने गरि सरकार समक्ष पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । उत्तरतर्फ (सडक नक्सामा) परेको जग्गा व्यक्तिकै नाममा फिर्ताको पहल प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उनले आश्वासन दिए ।
अवरोध क्षेत्रमा एक हप्ताभित्र निर्माण सामाग्रीसहित काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको कन्ट्रक्सनले जनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलले बताए । बाँके क्षेत्र नंं १ का प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी नमूना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापा मगर, नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद शाह, हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कृष्णनाथ ओझा (अहिले सरुवा), नरैनापुर वडा नं. ५ का अध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्य, स्थानीय जग्गाधनी, समूहका सदस्य समेतको उपस्थितिमा सहमति कायम गरिएको हो ।